ဥရောပ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 4
မောင်ရင်ငတေ ● ပါရီပုံရိပ်များ (နံရံပေါ်က အိုင်လပ်ဖ်ယူ) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၊ ၂၀၁၆ ပါရီပုံရိပ်များကဏ္ဍမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြရမယ့် အကြောင်းအရာတခု ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာက ပါရီမြို့ရဲ့ နာမည်ကျော် မွန့်မတ်ထ် ပန်းချီတောင်ကုန်းနဲ့...
မောင်ရင်ငတေ ● ပါရီ ရိုမန်တစ်ရပ်ဝန်းထဲက ရိုမန်မတစ်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်များ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၆ ရိုမန်တစ်လှေကားထိပ်က မောင်ရင်ငတေရဲ့ မဟာဟော်တယ် (ဓါတ်ပုံ မရငတ) ပါရီ ရိုမန်တစ်ရပ်ဝန်းထဲက ရိုမန်မတစ်ခဲ့တဲ့ ဘဝအကြောင်း...
မောင်ရင်ငတေ – ခရီးသွားခြင်းအနုပညာ- မဟာချိုင်အစုန်အဆန် (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၆ วงเวียนใหญ่ Wongwian Yai ဝုန်ဝန်ယိုင်မှ มหาชัย Mahachai မဟာချိုင်သို့ (ဓါတ်ပုံ မရငတ) Mahachai မဟာချိုင်...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – နောက်လိုက်ကောင်း အလိုရှိသည်
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – နောက်လိုက်ကောင်း အလိုရှိသည် (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – သင်္ကြန်လွန် ရဲ
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – သင်္ကြန်လွန် ရဲ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – သဘောတူကုန်ကြပြီ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်ရင်ငတေ – ဟော်လန်ကော်နာမှသည် အမ်စတာဒမ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၆ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတုန်းက ဟော်လန်ကော်နာ သွားလည်ရာကနေ ပါရီသို့ ပြန်ရောက်အပြီး မြောက်ပင်လယ်က တောင်မရှိတဲ့တိုင်းပြည် ပထမပိုင်းကို...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – အတာရေနဲ့ ချွတ်တဲ့ပွဲ
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – အတာရေနဲ့ ချွတ်တဲ့ပွဲ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ဒီတခါတော့ ကျေးဇူးတင်လိုက်မယ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ထမင်းကျွေးတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လောဘ
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ထမင်းကျွေးတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လောဘ (မိုးမခ) ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ၃ ပွင့် ၁ ခိုင် (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – နယ်သာလန် နဲ့ မြန်မာ (မိုးမခ) မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီ
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီ (မိုးမခ) မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ကွင်းပိုင်တစ္တေ ဝေလေလေ (မိုးမခ) မတ ၂၃၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – လုပ်ချင်အုံးဟဲ့ သမတ (မိုးမခ) မတ် ၁၉၊ ၂၀၁၆ No tags for this post. Related posts No related posts.